Archive du 20200401
Coronavirus Mitombo hatrany ny tarehimarika
Tafiakatra 50 ny olona mitondra ny tsimok’aretina Covid 19 amin’izao fotoana izao.
Basket-ball - fivorian'ny BC FIBA Maro ireo fanapahan-kevitra nivoaka
Fanapahan-kevitra vitsivitsy no noraisin'ny birao foiben'ny FIBA nivory tamin'ny alalan'ny videoconference niainga avy any amin'ny foiben'ny "Maison du Basketball Patrick Baumann" foiben'ny FIBA maneran-tany tamin'ny faha-26 sy 27 martsa lasa teo.
Resy ny valalabemandry
Roa herinandro latsaka kely izay no nihatra teto amin’ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara ny hamehana ara-pahasalamana.
Andro maneran-tany momba ny “autisme” Hiova endrika ny fanamarihana azy
Ny 02 aprily no fankalazana ny andro eran-tany ho fanentanana momba ny ôtisma. Manoloana ny fihibohana na eto Madagasikara na koa any amin` ireo firenena hafa dia miatrika fahasahiranana goavana ireo olona ôtista sy ny fianakaviany.
Halatra moto Saika raikitra ny fitsaram-bahoaka
Andro atoandro be nanahary tokony ho tamin’ny 1 ora sy fahefany tolakandro no nitrangan’ny fikasan’ny tovolahy iray saika hangalatra moto tao amin’ny lalam-baovaon’ny fokontanin’i Tanambao V, Toamasina.
NEW YORK Lasa fandraisana marary ny complexe us open
Mba hanampiana ny hopitaly any New York amin’ny fikarakarana ireo olona voan'ny coronavirus dia navadika vonjimaika handraisana an'ireo marary hafa ny "Complexe Us Open" any an-toerana.
Fanjifana herinaratra Mihena noho ny tsy fihodinanan’ny Indostria
Taratry ny fandrosoan’ny firenena ny filàna ara angovo misy ao aminy.
Fizarana fanampiana Tahaka ny kermesy ny teny Analakely
Mbola niverina indray ny fitangoronan’olombelona maro be tetsy amin’ny lapan’ny tanana Analakely omaly,
Kaominin’Antananarivo Renivohitra “Aza korontanina izahay…”
Tsy mety ireny fa manakorontana ny lamina efa napetraky ny tanàna. Iangaviana ny mba tsy hisian’ny fanakorontanana, hoy ny Lefitry ny ben’ny tanànan’Antananarivo
Mpampanofa fiara Tafiditra anaty fahasahiranana tanteraka
Velon-taraina ankehitriny ireo mpampanofa fiara tahaka ny eny amin’ireny hotely lehibe mpitondra mpizahatany sy ireo tompona fiara misehatra amin’ny lanonana tahaka ny mariazy (tête de cortège,…) ireny.
Toamasina Hitaky fanampiana ihany koa ny mpitondra Kamiao
Hisy ny hetsika ho tontosain’ireo mpitondra kamiao ao Toamasina amin’ity anio ity, raha ny fampitam-baovao avy any an-toerana.
Vidin’entana eny an-tsena Ny vary no tena mbola lafo
Raha tena nanahiran-tsaina ny maro ny fidangan’ny vidin’entana teny an-tsena ny herinandro teo noho ny fisian’ilay tsy fahafahana mivoaka nateraky ny coronavirus dia efa manomboka midina tsikelikely izany ankehitriny.
Fizarana fanampiana Ny zokiolona indray no nampiandrasana fotoana maharitra
Tsy mety miala eny amin’ny biraom-pokontany ny ankamaroan’ireo zokiolona eto amintsika izay fantatra fa nataon’ny Filoham-pirenena laharam-pahamehana
Mpivarotra amoron-dalana Miisa 500 ireo nomena fanampiana omaly
Mpivarotra amoron-dalana eny Analakely miisa 500 no nozaraina fanampiana Vatsy aina avy amin’ny fitondram-panjakana tetsy amin’ny ANS Ampefiloha omaly.
Kaominin’i Tanjombato Nahazo dabam-pako 20 isa
Ao anatin’ny ady amin’ny valan’aretina Coronavirus hatrany dia nisy omaly ny fanoloran’ny avy eo anivon’ny orinasa SFOI dabam-bako miisa 20 hitandroana ny fahadiovan’ny tanana ao Tanjombato ao.
Fasan’ny karana Olona maro be tsy tafody noho ny fihibohana
Mipetraka eto Madagasikara ny fahamehana ara-pahasalamana indrindra eto Antananarivo sy Toamasina.
Fitokana-monina 14 andro teny Anosiala Mitantara ny raim-pianakaviana iray
Betsaka ireo efa tonga saina amin’ny ady amin’ny fiparitahan’ny valan’aretina coronavirus eto amintsika ka miezaka ny manolo-tena mba hitokana ho
Fikambanan` ireo teratany Sinoa Nanome 270 tapitrisa Ar hadiana amin’ny Coronavirus
Manoloana ny zava-misy eto amin` ny firenena amin` ny fiparitahan` ny aretina “coronavirus”, dia nitondra ny anjara birikiny amin` ny fanohana ny vahoaka
GEHEM Nanolotra fitaovana mitentina 100 000 euros
Ho fitsinjovana an' ireo mpisehatra lohalarana amin` ny ady atao amin`ny “coronavirus” eto Madagasikara dia nanolotra fitaovana mitentina 100 000 euros
Mpivaro-damba etsy Analakely Tena mafy loha ve sa nanome kely ?
Ny mpivarotra akanjo sy fripery sy ny mitovitovy amin’izany dia tsy mahazo misokatra satria ao anatin’ireo filana maika.
Fihibohana an-trano Nampihena ny loto etsy sy eroa
Tsikaritra kosa aloha tato ato ny tsy fisian’ny loto mahazatra eny amin’ny arabe. Na eny anivon’ireo mpivarotra zava-pisotro sy ireo hani-masaka dia hita fa tsy ahitana loto firy tahaka ny talohan’ny fisian’ny aretina coronavirus.
Air France Hisy sidina manokana ny 4 aprily izao
Mampandre ireo teratany vahiny ny masoivoho frantsay eto Antananarivo omaly tamin` ny tranokalany fa hisy sidina manokana ho tonga eny Ivato ny 04 aprily izao ka hihazo an`i Paris-Frantsa.
Minisitry ny Atitany “Tongava ety Ivato raha hanampy ianareo”
Nanome valin-kafatra ny Tiako I Madagasikara omaly ny minisitry ny atitany Tianarivelo Razafimahefa raha nitafa fohy tamin’ny mpanao gazety.
Orinasa Habibo Miantso ny fiaraha-mientan’ny Malagasy
Mandritra izao fotoan-tsarotra lalovan’ny firenena izao dia tsy mitazam-potsiny ny vondrona orinasa Habibo fa nanolotra vokatra 3200 baoritra, izany hoe,
Covid-19 Mihamafy ny fiantraikany ara-toekarena
Miova isan’andro ny toe-draharaha! Mitotongana hatrany ny toekarena manerana izao tontolo izao. Raha ny any Frantsa dmanokana ia voafaritra
Ramboasalama Emilien “Aleo misoroka toy izay mitsabo”
Taorian` ny fanomezana toromarika nataon` ny filoha nasionalin` ny antoko Tiako I Madagasikara, Marc Ravalomanana, dia samy manatanteraka ny adidiny ireo depiote voafidy tamin` ny alalan` ny antoko.
Antananarivo mihiboka Mbola tazana eny ihany ireo mpangataka
Asa na adino tamin’ilay famindran-toerana faobe herinandro lasa izay na olom-baovao mihitsy fa mbola misy ihany ireo mpangataka tsikaritra tamina toerana vitsivitsy teto Antananarivo renivohitra omaly.
Orinasa Star Nanolotra rano 1 tapitrisa tavoahangy
Ho fiaraha mientana handresena ny valan'aretina Coronavirus dia nitondra ny anjara birikiny tetsy amin’ny toeram-pibaikoana momba ity viriosy COVID-19 ity
Mpitandrina mivady voan’ny Coronavirus « Négatif » ny valin’ny fitiliana natao tamin’izy ireo
Araka ny tati-baovao voaray vokatry ny fifandraisan-davitra nifanaovana tamin’ny Mpitandrina Rakoarimanana Arijaona Filoha Nasionaly Sampana Fifohazana FJKM SAFIF/FJKM halina ,